MUQDISHO, Soomaaliya - Taliska Ciidamada Xoogga dalka Soomaaliya ayaa maanta shaaciyay in uu la wareegay Askar ay tababar siisay dowladda Imaaraadka Carabta.
Abaanduulaha Ciidamada Xoogga dalka Soomaaliyeed Jeneraal Cabdullaahi Cali Caanood ayaa sheegay inay si rasmi ah ula wareegeen saldhiga Jeneral Gordad, Askar uusan cadadkeeda sheegin iyo agab military oo ay ku jiraan 25 baabuurta dagaalka ah.
Caanood ayaa tilmaamay in wixii maanta ka dambeeyay ay dowladda Federaalka qaadey mas'uuliyadda tababar iyo mashaaraadka Ciidamada ku sugan Saldhigga kadib markii Imaaraadka uu tababariyaashiisa kala baxay todobaadkii tagey.
Kulliyadda Tababarka Jeneraal Gordan ayaa waxaa aas-aastay 2014 dowladda Imaaraadka uu tababar ku siiyay in ka badan 2,000 [Labo Kun] oo Askari kuwaasi oo hadda ah kuwa ugu tayada fiiican Ciidamada xoogga dalka Soomaaliya.
Ciidamadii tababarka ku qaatey Xerada ayaa loogu magac-daray Guutada Daljir, iyadoo Taliye Caanood uu uga mahadceliyay dowladda Imaaraadka inay u dhameystirtay Askartan qalabkii iyo hubkii ay ku howlgali lahaayeen.
Jeneraal Caanood ayaa dhanka kale beeniyay warar soo baxay oo sheegay in Xerada qalabkii yaallay ay boob u geesteen Ciidamo katirsan dowladda, kadib markii ay ka guureen Tababariyaashii dalka Imaaraadka ka socday.
Dowladda Imaaraadka ayaa Todobaadkii tagey ku dhawaaqday inay joojisay howlihii tababarka ee ay ka waday Soomaaliya, gaar ahaan Muqdisho kadib markii uu xumaaday xiriirkii kala dhaxeeyay dowladda Federaalka Soomaaliya.
Puntland Focus Group oo soo dhaweysay go’aannada DFS iyo Puntland
War Saxaafaded 18.04.2018. 13:18